Home Wararka DF oo faah faahin ka bixisay Weerarkii W/Arrimaha Gudaha & Khasaaraha ka...
DF oo faah faahin ka bixisay Weerarkii W/Arrimaha Gudaha & Khasaaraha ka dhashay
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in gebi ahaanba howlgalkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xarunta Wasaaradda Arrimaha gudaha oo u dhaw Taalada Sayidka in la soo afjaray.
Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in la laayay dhamaan maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday, isla markaana ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen inay badbaadiyaan dadkii ku jiray gudaha xarunta Wasaaradda Arrimaha gudaha, iyagoo saacado kooban ku soo afjaray howlgalka.
“Dowladda Soomaaliya dadaalkeeda inta ugu badan waxay ku bixisaa in dadka Soomaalida ay helaan amni iyo amaanno, ka soo reynayay muddoyinkii ugu dambeysay oo talaabooyin laga qaadayay, Ciidamada amniga iyo dowladda qeybaheeda kale waa ay la falgaleen waqti kooban ayay ku soo afjareen, raggii argagixisada ee weerarka soo qaaday gebigoodba waa la dilay” ayuu yiri Wasiirka.
Wasiir Daahir Maxamuud Geelle ayaa tilmaamay in qaraxii maanta uu ka dhashay qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac, iyadoo dhaawacyada lagu dabiibayo xarumaha caafimaadka, isagoo intaa raaciyay in dhaawacyada cul culus ee gudaha dalka wax looga qaban waayo ay dowladdu diyaar u tahay inay u qaaddo caafimaad dibadda ah.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa hoosta ka xariiqay in dowladdu ay bulshada siiyo adeegada aas aasiga u ah nolosha beni’aadamka, isla markaana ka shaqeyso sugidda amnigooda, halka Maleeshiyada Al-Shabaab ay shacabka xasuuqaan oo caadistay inay baneestaan dhigga dadka muslimiinta ah.
Previous articleSAWIRRO: XOGTII Ugu dambeysay Weerarkii Alshabaab ku qaaday Wasaaradaha Gudaha iyo Amniga (Qasaaraha oo sii kordhay)
Next articleShan Su’aallood oo la iska weydiinayo Weerarkii Alshabaab ku qaadeen Xarunta Otto Otto (AKhriso)
Kala wanaagsanaa walaalaha Carbeed.
Guddomiyaha Golaha Shacabka oo Safar lamafilaan ah Dalka kaga baxay